DataNumen: Qalabka Kumbuyuutarka ee loogu talagalay horumarinta
Bogga ugu weyn Horumarinta
Qalabka horumarinta Barnaamijka (SDK) ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Mid kasta oo ka mid ah badeecadaha soo-kabashada xogta, waxaan sidoo kale siinnaa mid u dhigma Qalabka horumarinta software (SDK). Horumariyayaashu waxay wici karaan isku xirnaanta barnaamijka barnaamijka (API) wuxuu ka shaqeeyaa SDK si uu si toos ah u xakameeyo geedi socodka dayactirka una dhexgalo tikniyoolajiyadaheena soo kabashada xogta aan lala barbardhigi karin badeecadahooda softiweerka si aan kala go 'lahayn.
Xirmada SDK waxaa ku jira faylasha SDK DLL, dukumiintiyo iyo noodhadh tusaalayaal ah oo ku qoran luqado kala duwan oo barnaamijyo loogu talagalay isticmaalka API-yada.
Horumariyayaashu waxay ku barnaamijsan karaan:
Microsoft Visual C ++ oo ay ku jiraan C # iyo .NET
Microsoft Visual Basic oo ay ku jiraan VB .NET
Borland C ++ Dhise
Luuqad kasta oo barnaamij ah oo taageerta wicitaanka DLL
Waxaa jira seddex nooc oo noocyo shati ah oo SDK ah:
Shati Sameeyaha: U oggolow tirada gaarka ah ee horumariyayaashu inay u adeegsadaan SDK inay ku horumariyaan barnaamijyadooda. Tusaale ahaan, haddii midkood iibsado hal shati horumarineed, markaa hal horumariye kaliya ayaa isticmaali kara SDK si uu u horumariyo codsigiisa. Fadlan ogow isaga MA KARAAN dib ugu baahin SDK DLL codsigiisa haddii uusan sidoo kale soo iibsan rukhsadaha xilliyada shaqada ama shatiyada aan lahayn boqortooyada ee hoos lagu qeexay.
Shatiga Runtime: U oggolow tirada gaarka ah ee SDK DLLs dib-u-qaybin loogu diri karo arjiga. Tusaale ahaan, haddii midkood iibsado 10 ruqsadood oo waqti-socod ah, markaa isagu wuxuu dib ugu qaybin karaa 10 nuqul oo SDK DLLs ah codsigiisa.
Ruqsadda aan lahayn Boqortooyada: U oggolow tiro aan xadidnayn oo SDK DLLs ah oo dib loo qaybin karo si loogu diro arjiga. Tani waxay lamid tahay tiro aan xadidnayn oo ruqsadaha shaqada.
Nooca Qiimeynta Bilaashka ah:
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah ama aad u codsato nooca qiimaynta bilaashka ah ee xirmada SDK.